पॉलिएस्टर फिलामेन्ट धागाका प्रकारहरू - Zhejiang Leinuo वस्त्र टेक्नोलोजी कं।, लिमिटेड.
पॉलिएस्टर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिंथेटिक फाइबर मध्ये एक हो र चीनमा पॉलिएस्टर फाइबरको वस्तु नाम हो। यो टेरेफ्थेलिक एसिड हो (PTA) वा टेरेफ्थेलिक एसिड डायमेथाइल एस्टर (DMT) र इथिलीन ग्लाइकोल (MEG) कच्चा मालको रूपमा, एस्टेरीफिकेशन वा transesterization र फाइबर उच्च बहुलक को तयारी को संक्षेपण प्रतिक्रिया को माध्यम बाट - पॉलीथीन टेरेफाथालेट (पीईटी), स्पिनिंग र पोष्ट-प्रोसेसिंग द्वारा फाइबरको बनाइएको। पोलिएस्टर फिलामेन्ट, एक किलोमिटर भन्दा बढी रेसमको लम्बाई हो, फिलामेन्ट वाइन्डिंग ग्रुपमा। विभिन्न उत्पादन मोडहरूको अनुरूप, पॉलिएस्टर फिलामेन्ट सामान्यतया तीन वर्गमा विभाजित हुन्छ: कच्चा फिलामेन्ट, स्ट्रेच फिलामेन्ट र टेक्स्ड फिलामेन्ट.
कच्चा रेशमको सुरूमा
प्राइमरी रेशमले रेशम कातालाई तानेको बिना सीधै पग्लन्छ, जुन सामान्यतया UDY मा विभाजित हुन्छ, MOY, POY र HOY कताई गति अनुसार.
1.तानिएको तंतु (UDY) : यसको फाइबर अणुहरू मूलत: असंगठित र अनक्रिस्टलीकृत छन्, त्यसैले यस प्रकारको रेशमको कम शक्ति छ, ठूलो विस्तार र कमजोर आयामी स्थिरता, र सामान्यतया प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्न सकिदैन.
2. अर्ध-उन्मुख फिलामेन्ट (MOY) : यसको फाइबर अणुहरूको अभिमुखिकरणको थोरै मात्रा हुन्छ, र अभिविन्यास डिग्री UDY भन्दा उच्च र पूर्व-उन्मुख फिलामेन्ट भन्दा कम छ. यस फिलामेन्टको संरचना अवस्था सिधै लागू गर्न पर्याप्त स्थिर छैन.
3. पूर्व-उन्मुख तार (POY) : फाइबर आफैं मध्यम तानिएको छ, निश्चित अभिमुखीकरण र थोरै मात्रामा माइक्रो अनाजको साथ, तर यो अझै पनि समाप्त तारको आवश्यकताहरू भन्दा कम छ। यस प्रकारको रेशमको कम शक्ति र ठूलो विस्तार छ, जुन सामान्यतया सिधा कपडा प्रशोधनको लागि उपयुक्त छैन. तथापि, समग्र रेशमलाई अन्य फाइबरहरूको साथ उत्पादन गर्न सकिन्छ बुन्न चाहिने आवश्यकताहरू पूरा गर्न, ताकि कपडा एक विशेष शैली छ.
4. उच्च-अभिविन्यास धागा (HOY) : यो एक-चरण अल्ट्रा-उच्च गति कताई द्वारा तैयार छ, फाइबर अणुहरूको उच्च डिग्री र फाइबरको राम्रो रye प्रदर्शनको साथ, तर ठुलो विस्तार र थर्मल संकोचन, जुन प्रयोगको लागि सामान्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन.
स्ट्रेच रेशमले स्पिनिंगको प्रक्रियामा फाइबरलाई मध्यम तानेर प्राप्त फाइबरलाई जनाउँछ. तान्न को विभिन्न सीमा अनुसार, यसलाई स्ट्रेच रेशममा विभाजन गर्न सकिन्छ (DY) र पूर्ण तन्काइएको रेशम (FDY).
1. तन्काइएको रेशम (DY) : यसले स्पिनिंग प्रक्रियामा कम-स्पीड तनावले बनेको रेशमलाई जनाउँछ. यसको क्रिस्टलनेटीको बारेमा छ 40%.
2. पूर्ण तानिएको धागा (FDY) : यसले स्पार्निंग र एक-चरण प्रक्रिया ड्राइंग द्वारा उत्पादित धागालाई जनाउँछ. यस प्रकारको धागाको गुणस्तर स्थिर छ, केही कपाल संग, भाँचिएको टु ends्गाहरू र राम्रो र d्ग एकरूपता। यसको उत्पादनहरूमा USES को एक विस्तृत श्रृंखला र एक ठूलो बजार क्षमता छ, जुन चीनमा घरका कपडा र कपडाका कपडाहरूको लागि मुख्य कच्चा माल हो.
मेकानिकल र थर्मल शक्तिहरूको कार्य अन्तर्गत, सिधा फाइबरहरू घुमाउरो फाइबरमा परिणत हुन्छन्, भनिन्छ बनावट फिलामेन्ट्स, वा बनावट फाइबर। यो परम्परागत बनावट तार मा विभाजित गर्न सकिन्छ (TY), टेन्सिल बनावट तार (DTY) र हवा बनावट तार (ATY).
1. परम्परागत बनावट धागा (TY) : यो कताई घुमाउने को तीन चरण प्रक्रिया द्वारा बनाइएको हो -- तान्ने मोड -- गलत मोड़ विकृति वा उच्च-स्पिड कताईको प्रक्रिया द्वारा -- कम गति गलत मोड, केहि निश्चित लोच र शराबी छ, र राम्रो आयामी स्थिरता.
2. बनावट धागा तन्नुहोस् (DTY) : साधारणतया, POY कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र कम-लोचदार धागा तान्न र एक-चरण प्रक्रिया विकृत बनाएर गरिन्छ. यससँग निश्चित लोच छ र TY भन्दा कम नरम महसुस गर्दछ, तर यसको गुणवत्ता स्थिर छ र यसको बलियो विस्तार ले लिने आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ.
3. एयर बनावट धागा (ATY) : यो एयर जेट टेक्नोलोजीद्वारा टाउ बन्डलहरूको क्रस वाइन्डिंग प्रोसेसिंगलाई अनियमित किकि co कुण्डलको रूपमा दर्साउँछ, ताकि टो बन्डलहरूमा यार्नको फ्लफी लूपहरू हुन्छन्। यो सामान्यतया FDY सँग कच्चा मालको रूपमा उत्पादन गरिन्छ।, र केहि उत्पादहरू POY का साथ कच्चा मालको रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ. तैयार उत्पादनहरू घर टेक्सटाइल कपडा उत्पादन गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ.
पॉलिएस्टर फिलामेन्ट फाइबरको नयाँ विविधता भिन्न फाइबर समावेश गर्दछ, कार्यात्मक फाइबर र नक्कल फाइबर। हालका वर्षहरूमा, रेशम नक्कल टेक्नोलोजीको विकासको साथ, पॉलिस्टर मोनोफिलामेन्ट ठीक फाइबर तर्फ विकास भइरहेको छ, र ०.००१११dtex को रेखा घनत्वको साथ अल्ट्रा-फाइन फाइबर उत्पादन गर्न सक्दछ.
मुहान: रासायनिक फाइबर विश्वकोश, कपडा सुक्खा माल.